Finding Mr. Destiny ( 2010 ) - Myanmar Asian TV
Finding Mr. Destiny ( 2010 )
2010 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ လူငယ်ကြိုက် Romance , Comedy ဇာတ်ကားလေးပါ …
အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေ အဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဦးဖြစ်တဲ့ Goblin ထဲက မှင်စာ Gong Yoo နှင့် Chicago Typewriter ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသမီး Im Soo-jung တို့က အတွဲညီညီနဲ့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး အနည်းငယ် ပြောပြရမယ်ဆိုရင် –
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အချစ်ဦးကို မေ့မရသေးပဲ အဲ့အချစ်ဦးကြောင့်လည်း အခုချိန်ထိ လာပိုးသမျှသူတွေနဲ့လွဲကာ နဖူးစာရွာလည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ အပျိုကြီး ဆောဂျီဝူး ( Im Soo-jung) … အဖေဖြစ်သူရဲ့ နားပူနားဆာလုပ်မှုကြောင့် အချစ်ဦးကို ရှာဖွေပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အချစ်ဦးကို ရှာဖွေရင်း ….
ဟန်ဂီဂျွန် ( Gong Yoo ) ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် တစ်ယောက်တည်းသောသူလည်းဖြစ် , အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လာသမျှ ဘာမဆို ခေါင်းမာတတ်တဲ့သူ ဒီလိုနဲ့ အချစ်ဦးရှာဖွေပေးတဲ့လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ဖြစ်သွားပြီး ဆောဂျီဝူး ရဲ့ အချစ်ဦးကို ရှာဖွေပေးရင်း …
နှစ်ယောက်သား ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ကုန်ကြမလဲဆိုတာ ဟာသလေးတွေနဲ့ ရောနှောထားပြီး အချစ် Fancy ဆန်ဆန် ဇာတ်ကားလေးပါ …
အခုချိန် ရာသီ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ အိမ်ထဲမှာ မုန့်လေးစား ကော်ဖီလေးသောက်ရင်း ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ …
Rating အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ IMDb မှာ 6.6/10 နှင့် AsianWiki မှာ 87 အထိ ရရှိထားတဲ့ Korea Romance Comedy Film လေးပါ …
Translator : May Thwe Ko
Actors: Cheon Ho-jin, Gong Yoo, Im Soo-jung, Jang Young-nam, Jeong Gyu-su, Lee Chung-a, Sung-hwa Jung
Server Subtitle File Size Links
Openload.co Myanmar 939 MB Download Soliddrive.co Myanmar 939 MB Download
If I Were You ( 2012 )
ဒီတစ်ခါမှာပရိတ်သတ်ကြီးကို Chinese Romance Comedy movie လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Movie ရဲ့အမည်ကတော့’If I were you’ လို့အမည်ရပါတယ်။ ‘If I were you’ဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့တရုတ်အချစ်ဟာသဇာတ် ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားလေးရဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ လီချီ (Li Qi)ဖြစ်ပါတယ်။ Main castsတွေကတော့ Jimmy Lin နဲ့ Yao Di…
Imagine You & Me ( 2016 )
Romance ကားလေးတွေကြည့်ချင်သူတွေအတွက် Philippine Romance Movie ကားကောင်းလေးပါ … 2016မှာထွက်ရှိထားပြီး Rating အရ IMDb မှာလည်း 6.5ရထားတဲ့ကားလေးပါ … ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ – အခက်​အခဲ​တွေ ရှိ​ပေမဲ့ ​ပျော်​​ပျော်​ ​နေတက်​တဲ့ ​ကောင်​မ​လေး ဂါရာ ….. တစ်ဖတ်သတ်ချစ်ကာအသဲ ကွဲ​နေတဲ့ ခပ်​ဆိုးဆိုး ​ကောင်​​လေး.အန်ဒရူး …… ​သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအချစ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ အီတလီမြို့မှာတွေ့ဆုံမိကြတဲ့အခါမှာတော့…
Detective K : Secret of the Living Dead ( 2018 )
2018 Feb မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Korea Movie အသစ်လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ရှေ့နှစ်ပိုုင်းတွေမှာ Detective K : Secret of Virtuous Widow ( 2011 ) နဲ့ Detective K : Secret of the Lost Island…
ချစ်ရတဲ့ Myanmar Asian TV Channel ပိရိသတ်တွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကာတွန်းကားလေး တစ်ကားတင်ဆက်ပေးမယ်နော် … ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာဘီ မင်းသမီး ဇာတ်ကားလေးတွေဆို မလွတ်တမ်းကြည့်ခဲ့ရတာတွေကိုမှတ်မိနေသေးတယ် … Rapunzel ကိုကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပဲ … စွန့်စားခန်းကလဲပါ အချစ်ဇာတ်သွားလေးကလဲပါနဲ့ … အခုကားကတော့စွန့်စားခန်းပိုများတယ် … ပြီးတော့ တော်ဝင်မိသားစုအတွင်းပြသာနာလေးကို ရိုက်ပြထားတာ … မင်းသမီးဦးစားပေးတော့မဟုတ်ဘူး ,…
Oolong Courtyard : Kung Fu School ( 2018 )
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ရှောင်လင် ကလေး နှစ်ယောက် အသက်ကြီးလာတဲ့ Style ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်…. ငယ်ငယ်တုန်းက ရှောင်လင် ကလေး နှစ်ယောက်ကို ထိန်းခဲ့ရတဲ့ Ng Man Tat ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားက အခုတစ်ခါမှာတော့ ကျောင်းထိုင်ဘ၀ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီး… ငယ်ငယ်လေးကတည်းက Ng Man Tat က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီက အချစ်ကို မျှော်လင့်ခဲ့သူ…
Sweet Alibis ( 2014 )
2014 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ Taiwanese Romance Comedy Film လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင် , ပရိုဂျူဆာ , ဒါရိုက်တာ စွယ်စုံရ ထိုင်ဝမ် မင်းသားကြီး Alec Su နှင့်အတူ ကျနော်တို့ရဲ့ childhood girl crush ဖြစ်တဲ့ မက်မွန်မြေကချစ်တေးတပုဒ် ဇာတ်လမ်းထဲက ချစ်စရာ…
The Plan Man ( 2014 )
ဒီတစ်ခါတော့ မင်းသားကြီး Jung Jae Young,မင်းသမီး Han Ji Min တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ IMDB 7.1,MyDramalist 8.1/10တောင်ရရှိထားတဲ့ Comedy,Romance ကားကောင်းလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Plan Manဆိုတဲ့အတိုင်း အရာရာကို စနစ်တကျနဲ့ alarmပေးထား အစီအစဉ်ဆွဲပြီးမှ လုပ်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကြောက်ပြီးအသန့်ကြိုက်တဲ့ ဟန်ဂျောင်ဆော့ ဆိုတဲ့စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး သူ့လိုစနစ်တကျနေတတ်တဲ့ စာကြည့်တိုက်နားကစတိုးဆိုင်အရောင်းဝန်ထမ်း ဂျီဝန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေကိုသဘောကျမိပြီး ဖွင့်ပြောဖို့အတွက် သူ့ဒိုင်ယာရီမှတ်စုစာအုပ်ကို…
The Ex-File 3: The Return of the Exes ( 2017 )
The Ex-Files ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို MMATV ပရိသတ်ကြီးတို့ကို အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တော့မယ် … ရှေ့မှာ Ex-Files 1 နဲ့2တင်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ 2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ The Ex-Files3: Return of the Exes လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းလေးကတော့…
The Stolen Princess : Ruslan and Ludmila ( 2018 )
ဒီတစ်ခါတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကားသစ်လေးကတော့ The Stolen Princess ဆိုတဲ့ 2018ထွက် Ukarine 3D animation ကားသစ်လေးပါ ??? ဒီကားလေးက ရုရှကဗျာဆရာကြီး ပူရ်ှကင် ရဲ့ ပုံပြင်ကိုအခြေခံထားတာပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တပ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ ”ရူစလန်”ဆိုတဲ့နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေရေးသမားလေးတစ်ယောက်…. တစ်ညမှာ လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးပြီးစွန့်စားချင်စိတ်ရှိတဲ့ ဘုရင့်သမီးတော်”မီလာ”နဲ့တွေ့ဆုံမိတယ် ရူစလန်ကတော့မီလာ့ကိုဘုရင့်သမီးတော်မှန်းမသိပါဘူး အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းဖို့ကြံနေတဲ့မှာ်ဆရာကြီးကမီလာ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ မှော်ဆရာကြီးက မီလာ့ကိုဘာလို့ဖမ်းခေါ်သွားတာလဲ??? ဘုရင်ကြီးနဲ့မှော်ဆရာကြီးကကော ရန်ငြိုးရှိလို့လား?? ရူစလန်ကကော မီလာ့ကိုကယ်တင်ပါ့မလားဆိုတာ??…
Secrets in the Hot Spring ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ Taiwan Horror Comedy လေးကို ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အေးဆေး chill ရင်း ကြည့်လို့ရအောင် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … စစတုန်းကတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ တကယ် သောက်ကျိုးနည်းဟာသကားစစ်စစ်ပါ … ရှင်းရှောင်ဂျင် ဆိုတာ မိသားစုစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ ရေပူစမ်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကို မဆက်ခံချင်လို့ တဇွတ်ထိုးနေချင်သလိုနေတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ် … တနေ့…
Genre: Comedy, Friendshhip, Horror
Trailer: Finding Mr. Destiny ( 2010 )